Manambara ny fotoana hanalefahana sy hanariana ny rano radioaktifa avy amin’ny orinasa Fukushima i Japana · Global Voices teny Malagasy
Fantaro ny Tritioma, singa radioaktiva sarimiaina
Voadika ny 02 Jolay 2021 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, Português, English
Trondrom-pasika japoney (Arctoscopus japonicus, fantatra amin'ny anarana hoe hatahata amin'ny teny japoney), trondro foto-tsakafo azo tany amin'ny ranomasinaivelan'i Prefektiora Miyagi, sahabo ho 100 km avaratry ny toby nokleary Fukushima Daiichi. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Nanambara ny governemanta Japoney tamin'ny 13 aprily fa havoaka any amin'ny Ranomasimbe Pasifika ao anatin'ny roa taona ny rano voapoizina namokarana herinaratra nokleary tao Fukushima. Hatreto, dia nampisy biby famantarana (mascotte) mahafatifaty, fanamelohana ary tahotra ny hoavin'ny fiarahamonina eo an-toerana ity drafitra ity.
Nahatonga ny fitsonik'ireo reaktera (mpamerin-tosika) nokleary telo nampiasain'ny TEPCO, orinasa mpamatsy herinaratra, ny loza nokleary mahatsiaravina tamin'ny volana martsa 2011. Nifandray maharitra tamin'ny akoranafo radioaktiva mora mirehitra an'ireo reaktera telo ny rano ambanin'ny tany mikoriana mamakivaky ny fotodrafitrasa nokleary Fukushima an'ny TEPCO, miaraka amina rano fampangatsiahana niniana narotsaka.
Rehefa mifampikasoka amin'ireo vihy (noyaux) mibaribary ny rano dia voaloton'ny izôtôpy radioaktifa, ao anatin'izany ny sezioma, kobalta, karbona 14 sy ny tritioma. Satria sarotra esorina amin'ny rano ireo mpandoto ireo, dia angonina sy tehirizina ao anatina fitehirizan-dranoka am-polony ireo maloto tsy mitsaha-mitombo mba hisorohana ny fandotoana ny ranomasina.
Maherin'ny 1,25 tapitrisa taonina ny rano voapoizina tehirizina ankehitriny ao amin'io toerana io, ary mitombo eo amin'ny 170 taonina isan'andro ny habetsany.
Fitehirizan-drano voaloto manoloana ireo tranoben'ny reactera ao Fukushima Daiichi. Sary: Susanna Loof / IAEA.
Raha efa nanambara ny fikasan'izy ireo hanary ny rano maloto any amin'ny Ranomasimbe Pasifika ny governemanta Japoney tamin'ny Oktobra 2020, dia nanome fe-potoana amin'ny fanariana izany kosa ny fanambarana vaovao tamin'ny 13 aprily .
Nofaranan'ny fanapahan-kevitra ny adihevitra nandritra ny taona maro amin'ny fomba hanariana ny rano izay ampy hamenoana in-500 amin'ny dobo filomanosana Olaimpika, izay tafaporitsaka ho ao amin'ireo tobin-herin'aratra efa nizaka fitsoniky ny “fo-ny” taorian'ny horohoron-tany sy tsunami tamin'ny taona 2011
Kisendrasendra, ampy namenoana ny Tokyo Dome, singam-pandrefesana mahazatra ampiasain'ny fampitam-baovao any atsinanan'i Japana ny habetsaky ny rano voaloto.
Saingy, tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny 13 aprily, nanome antsipiriany vitsivitsy amin'ny fomba hamarinana ny rano ho any an-dranomasina ny governemanta Japoney, toy ny avy amin'ny fantsona mamarina an-dranomasina avy ao amin'ny fotodrafitr'asan'ny reacktera, na avy amin'ny sambo mpitatitra solitany.
Nanazava kosa ny governemanta Japoney fa tena natao matsatso be ny rano maloto ao anaty kaontenera ka tsy hitondra loza ho an'ny tontolo iainana na ny fahasalaman'ny olombelona.
Nanazava ihany koa ny governemanta fa tsy misy atahorana ho an'ny fahasalaman'ny olombelona ny tena mpandoto indrindra, dia ny tritioma, izôtôpa radioaktifa, ​ary famarin'ny tobin'angovo nokleary manerana an'izao tontolo izao.
Araka ny tantaram-baovaon'ny Nikkei Asia:
Rehefa mamoaka rano voakarakara ny TEPCO, dia miha-malefaka mihoatra ny 100 heny amin'ny fampiasana ranomasina izany, izay miantoka fa misy tritioma latsaky ny 1.500 becquerel izany. Faha-efapolo amin'ny fenitra nasionaly izany. […]
Araka ny filazan'ny Minisiteran'ny Toekarena, ny varotra sy ny indostria, tritioma 860 becquerels no voatahiry ao anaty tanky ao amin'ny orinasa Fukushima – mitovy amin'ny haben'ny tritioma avoakan'ny Toby Nokleary Wolseong any Korea Atsimo tao anatin'ny enina ka hatramin'ny fito taona. Toby mpamokatra any Frantsa mety mahavoaka io habe io ao anatin'ny herintaona latsaka.
Na dia milaza aza ireo manam-pahaizana momba ny simia an-dranomasina fa ilaina ny fampahalalana bebe kokoa hanombanana ny loza ateraky ny fanariana an-dranomasina, dia nanamafy kosa ny governemanta Japoney fa hesorina ny isôtôpa hafa mampidi-doza kokoa izay mandoto ny rano maloto. Amin'ny fampiasana ny rafitra fanalana nioklida maro, Advanced Liquid Process Sytem (ALPS), “esorina amin'ny rano maloto ny ankamaroan'ny nioklida” afa-tsy ny tritioma.
While ocean chemistry experts say that more information is needed to assess the risk of ocean disposal, the Japanese government asserts that other, more dangerous isotopes contaminating the wastewater will be removed. Using the Advanced Liquid Process Sytem (ALPS) multi-nuclide removal system, “most nuclides are removed from contaminated water” except for tritium.
Mba handresen-dahatra ny besinimaro, nanao fifanekena mampiadi-hevitra tamin'ny goavan'ny dokambarotra Dentsu ny governemanta Japoney mba hanao fanentanana fampiroboroboana ny drafitra fanariana an-dranomasina:
Ahoana ny fiezahan'ny governemanta Japoney manamarina ny fanipazana rano maloto radioaktifika mankany amin'ny Pasifika? Amin'ny alalan'ny famoronana endrika mahafatifaty, mazava ho azy.
Fantaro ny Tritioma, singa radioaktifa amin'ny sary.
Na izany aza, nihemotra tampoka ny fanentanan'i Dentsu, ary noesorina tamin'ny aterineto ny sary biby famantarana (maskoty) roa andro monja taoriana.
Misy fiantraikany lehibe ho an'ireo vondrom-piarahamonina manamorona ny morontsirak'i Fukushima, izay nitolona nandritra ny folo taona mahery ho tafarina tamin'ny fandravana nateraky ny horohoron-tany sy tsunami mahery vaika nitranga tamin'ny 11 martsa 2011, ary avy eo ny fanakorontanana sy ny fanilikilihana nateraky ny loza nokleary taorian'izay ny fanapaha-kevitra hamoaka ny rano maloto.
Manamarika ao amin'ny Twitter ilay mpiara-manoratra iray tamin'ny fanadihadiana vao haingana izay nanadihady ny faharetana sy ny famelomana indray ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka any Soma, Prefektioran'i Fukushima taorian'ny horohoron-tany, tsunami ary loza nokleary, antsoina hoe Leslie Mabon, mpampianatra ambony ao amin'ny Scottish Association for Marine Sciences (SAMS) hoe:
Nandia lalana lavitra ny jono Fukushima hatramin'ny taona 2011. Araka izany, ny zavatra rehetra – toy ny famoahana rano voakarakara – izay heverina ho famerenana amin'ny laoniny ity fanarenana ity dia mety ho tratran'ny fiahiahiana, tsy ny resaka toekarena ihany fa ny mety ho fiantraikan'izany amin'ny fivelomana. (6)
Manamarika koa i Mabon hoe:
Nisy […] ny ezaka lehibe avy amin'ireo koperativan'ny jono sy ny governemanta eo an-toerana/isa-paritra mba hananganana fahatokisana sy fireharehana amin'ireo trondro Fukushima […] Nilaza taminay ireo nanontaniana fa mahafinaritra tokoa ny mivoaka sy mahita indray ny trondro eo an-toerana ao anatin'ny menio (sakafo zava-misy), sy ny fanehoana fahasitranana (fiverenana amin'ny laoniny) aterak'izany bebe kokoa. Ka tena misy ny rehareha amin'ny hazandranomasina eo an-toerana izay hita fa matsiro sy avy amin'ny tontolo iainana madio sy voajanahary indray […]
Nilaza i Mabon fa misy ny tahotra fa handoto ny fomba iheverana ny trondro Fukushima ny drafitra famoahan-drano maloto avy amin'ny tranoben'ny mpamorona aratra Fukushima, ka miteraka fihenan'ny tinady sy vidiny ambany.
Na izany aza, nilaza i Mabon fa tsy olana ara-toekarena azo vahana fotsiny amin'ny onitra izany. Midika ihany koa fa fahaverezan'ny lova ara-kolontsaina sy fanimbana ny fifandraisana ara-tsosialy ary ny kolontsaina eo an-toerana tsy azo soloina ny fihenan'ny jono ao Fukushima.
In short: you can give someone compensation, but you can't always give someone their livelihood back. This is why it is very important we take seriously – and give respect to – the concerns of fishers in the decision-making process around treated water at #Fukushima. (8) pic.twitter.com/naI8V3kipK
Raha fintinina: afaka manome onitra olona ianao, fa tsy afaka mamerina ny fiveloman'ny olona foana ianao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fandraisantsika andraikitra – sy ny fanajana – ny olan'ireo mpanjono amin'ny dingana fanapahan-kevitra manodidina ny rano voakarakara ao #Fukushima.